7 Izindawo ezihamba phambili zokuhamba mahhala e-Europe | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Izindawo ezihamba phambili zokuhamba mahhala e-Europe
Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 15/11/2020)
Kunezincwadi ezingenakubalwa ezinamathiphu nezincomo zanoma yiluphi uhlobo lohambo oluya eYurophu, nanoma yiluphi uhlobo lokuhamba. Lezi zincwadi zokuqondisa zilungele ukufunda ngomlando namasiko, kodwa ngeke bakutshele ngamathiphu angaphakathi eYurophu. Izinkambo zokuhamba zamahhala ziyindlela enhle yokuthola iYurophu, futhi uzothola uhambo lwamahhala lokuhamba kwedolobha kuwo wonke amadolobha aseYurophu.
Gqoka izicathulo ezintofontofo, ngoba sisuka nohambo oluya e- 7 izinkambo ezihamba phambili zokuhamba mahhala eYurophu.
1. Prague Kuhle Mahhala City Walking Tour
Umhlahlandlela okhuluma isiNgisi uzohlangana nawe ku- Ihostela likaphayinaphu edolobheni elidala le 2.5 amahora’ ukuhamba ngezinyawo uzungeze iPrague. Uzoqala uhambo lokuhamba ngezinyawo esigcawini esidumile sase-Old Town, qhubeka uye kuCharles Bridge oyisithonjana. Ukusuka esikhungweni sabavakashi kuya ezindaweni ezinhle kakhulu zedolobha zesidlo sasemini neziphuzo, IPrague’s do’s futhi ungayenzi, uzoqedela uhambo ngamathani ezincomo nezindaba ongasoze wafunda ngazo ezincwadini zomhlahlandlela.
Ukuvakasha kwedolobha lamahhala ePrague kungenye ye 7 izinkambo zokuhamba ezihamba phambili eYurophu, ngenxa yomhlahlandlela okhethekile. Uzoshiya ukuvakasha ujabulile ukuthola iPrague, futhi kunohlu olukhulu lwezindawo zokudlela ezinikela ngamamenyu asemini ashibhile. Ngaphezu kwalokho, uzofunda nge-bar-hopping yobhiya wobuciko obuhle kakhulu waseCzech, nemibono emihle yePrague emangalisa.
Uhambo lokuhamba mahhala lwe-Amsterdam, owaziwa nangokuthi uhambo lokuhamba kwedolobha laseFreeDam, imayelana nokuthola nokujabulela idolobha elinenkululeko enkulu eYurophu. Uhambo lusuka nsuku zonke kusuka endaweni yomhlangano e-Exchange Stock ngohambo lokuhamba lwamahora amathathu, kusukela ezinganekwaneni ze-Old Amsterdam kuya ezindabeni zesimanje nezesimfashini zase-Amsterdam.
Ngesikhathi salokhu 3 amahora omnandi, uzohlangana nabahambi abavela emhlabeni jikelele futhi ufunde ngenqubomgomo yezidakamizwa ezikhululekile zase-Amsterdam, amalambu abomvu esifundeni, ipolitiki, nomlando kusuka kubaqondisi’ izindaba ezihlekisayo. Ngaphezu kwalokho, ohambweni lokuhamba mahhala, ungathola amathiphu wangaphakathi kumhlahlandlela ku uhambo lwosuku oluhamba phambili oluvela e-Amsterdam nakulo lonke elaseYurophu.
Amanani entengo aseBrussels aya e-Amsterdam
London to Amsterdam zemininingwane Amanani
Amanani eBerlin aya e-Amsterdam
Amanani eParis aya e-Amsterdam
3. I-Berlin Best Free City Walking Tour
Uhambo lokuqala lwaseBerlin lokuhamba mahhala luyindlela engcono yokuthola umlando wedolobha, izimpawu zomhlaba, nokugqamisa emahoreni ambalwa. Kuwuhambo olukhulu lokuhamba lokuya kwelinye lamadolobha amakhulu kakhulu eJalimane, ngomlando ocebile, and politics.
Ngaphezu kokuvelele okungokomlando, IBerlin inikeza izinkambo ezahlukahlukene ezizokhombisa iBerlin kusuka ezinhlangothini ezahlukahlukene; kwezobuciko, ukudla, noma iziphuzo’ kugxile. ohambweni lokuhamba ngezinyawo lwamahhala lwaseBerlin Original, uzovakasha 6 zezimpawu eziyinhloko eBerlin, futhi uzwe ngezindaba ezingemuva kodonga namasiko aseBerlin.
Uhambo lokuqala lwaseBerlin lokuhamba mahhala luhamba kabili ngosuku, kusuka endaweni yomhlangano e “Intando”. Umhlahlandlela uzobe elinde ohambweni lokuqala lokuhamba mahhala eBerlin isikibha futhi angakujabulela ukuncoma izindawo ezinhle kakhulu zephathi edolobheni, nokuthi kanjani ukuhamba usuka eBerlin uye kwamanye amadolobha amakhulu eJalimane kanye nezinqolobane zikazwelonke.
IFrankfurt iye eBerlin Izintengo Zezitimela
Amanani entengo eLeipzig aya eBerlin
IHanover iye eBerlin Izintengo Zezitimela
IHamburg iye eBerlin Izintengo Zezitimela
IVenice ingelinye lamadolobha amancane kakhulu e-Italy. Noma kunjalo, kulula kakhulu ukulahleka lapho uzulazula ezitaladini zawo eziwumngcingo futhi izakhiwo obumangalisayo. Ukuvakasha kokuhamba kwedolobha lamahhala eVenice kuzokuholela emlandweni, isiko, art, nokwakhiwa kwezakhiwo ku 2.5 uhambo lwamahora. Umhlahlandlela onothando uSimona uzokutshela konke mayelana nedolobha, cuisine, nezindawo zothando.
Ukugqama kohambo lokuhamba mahhala lwaseVenice yiSimona, umhlahlandlela, kanye nomoya omnandi. Kungakhathalekile ukuthi lina kanjani, inani labantu, uzoba nesikhathi esihle futhi uthole izincomo eziningi Ukudla kwase-Italy neziphuzo zakwa-Eprol eVenice.
EMilan kuya eVenice Izintengo Zesitimela
I-Bologna eya kuVenice Izintengo Zesitimela
I-Treviso iya eVenice Amanani Esitimela
5. IParis Best Free City Walking Tour
IParis ingelinye lamadolobha abavakashi kakhulu eYurophu, ingasaphathwa eyomhlaba. Lapho i-Eiffel Tower ne-Avenue des Champs-Elysees kugcwele izivakashi, kunzima ukujabulela umlingo wamasayithi wezimpawu zedolobha. kodwa, ohambweni lokuhamba mahhala, umhlahlandlela wakho uzoqinisekisa ukuthi uzothola okungcono kakhulu kwalezi zimpawu zomhlaba, futhi okuningi okuningi ohambweni oluhlukile olunezitayela.
IParis iyikhaya lamagugu amaningi afihliwe, ngakho-ke inani lokuvakasha lokuhamba mahhala alipheli. Kukhona ukuvakasha kwemini nobusuku, izinkambo zayo yonke indawo, izinkambo zokupheka nezobuciko. Nokho, idolobha lamahhala lokuhamba mahhala eParis amagugu afihliwe nohambo oluyimfihlo lwaseParis. Umhlahlandlela uzokuthatha ngamavesi afihlekile eLouvre, izakhiwo zokuthola izindawo eziyimfihlo zezithombe, kude nezixuku kanye nenhliziyo yeParis.
Amanani e-Amsterdam aya eParis
London to Paris Isitimela Amanani
IRotterdam iye eParis Izintengo Zezitimela
Amanani entengo aseBrussels aya eParis
6. I-Zurich Chocolate Free Walking City Tour
Ngaphezu komhlahlandlela omkhulu futhi omnandi, Idolobha laseZurich elihamba phambili kakhulu lokuhamba ngezinyawo liyizulu lokupheka. Kungani uhamba edolobheni elidala kanye nokugqamisa kweZurich ngesitayela sendabuko, lapho ungayinonga ngoshokoledi waseSwitzerland waphezulu. Nambitha ama-truffle, funda ngokukhishwa kokhokho bese uvakashela i- ama-chocolatiers amahle kakhulu eYurophu njengoba ubabaza isonto laseLindenhof nelaseGrossmunster.
I-Zurich uhambo lokuhamba mahhala yi 2 amahora amade futhi isuka njalo ngoMgqibelo isuka eParadeplatz, futhi asikho isidingo sokubhalisa.
Interlaken ukuze Zurich zemininingwane Amanani
ILucerne iya eZurich Izintengo Zesitimela
Amanani entengo yeLugano kuya eZurich
IGeneva kuya kuZurich Izintengo Zesitimela
Indlela engcono kakhulu yokuqalisa ukuhlola iVienna usohambweni lokuvakashelwa kwedolobha lamahhala lokwamukela eVienna. Cishe 2 amahora uzothola umlando omfushane waseVienna nezimpawu zawo eziyinhloko, lapho unganambitha ukudla kwaseViennese ngesidlo sasemini kusuka eMarina, omunye wabaqondisi abahamba phambili eVienna.
Kabili ngosuku, Umhlahlandlela uzokulinda e-Albertina square ohambweni lomlando oluzungeze iVienna.
Amanani eSitimela aseSalzburg aya eVienna
EMunich kuya eVienna Izintengo Zesitimela
Izintengo zeGraz eziya eVienna
Prague ukuze Vienna Izitimela Izintengo
Into ehamba phambili ngohambo lokuhamba mahhala ngumhlahlandlela. Ngenkathi izinkambo eziningi zingesiNgisi, umhlahlandlela uzoletha konke odinga ukukwazi mayelana nedolobha ngesiNgisi esihle kakhulu. Yonke imibuzo izophendulwa futhi uzoqeda uhambo ngezincomo ezimangazayo, ama-anecdotes, nolwazi mayelana nedolobha. Into yesibili enhle kakhulu ukuthi 7 ukuhamba kahle kwedolobha izinkambo eYurophu, ukuthi bakhululekile, mfushane futhi kuze kube seqophelweni, nokubandakanya.
Ukuvakasha KwamaHhala Okuhamba Emadolobheni EYurophu Imibuzo Evame Ukubuzwa
Ingabe Lezi Zihambo Zokuhamba Zamahhala Zikhululekile Ngempela?
Izinkambo zokuhamba zedolobha lamahhala zisekelwe kumathiphu. Okushoyo, awudingi ukubhuka indawo ohambweni ukuze ukhokhe, kodwa ekugcineni kohambo, kufanele ubonge umhlahlandlela omkhulu ngokuncipha.
Ngidinga Kangakanani Ukuncoma?
Ukuthelekiswa kuyahluka kuye ngamadolobha, kepha ngokwesilinganiso ithiphu ingu- € 5 kuye ku- € 15.
Ngiwuthola Kanjani Umhlahlandlela?
Imihlahlandlela yokuvakasha yedolobha yamahhala izohlangana nawe ezindaweni zomhlangano ezimaphakathi, futhi uzobabona ngehembe labo. Ngaphezu kwalokho, cishe bazoza bakubingelele.
Ingabe Kukhona Uhambo Lokuhamba Ngezinye Izilimi Ngaphandle KwesiNgisi?
Iningi lokuvakasha lokuhamba mahhala eYurophu linikeza izinkambo ngesiNgisi nolimi lwendawo, ngezivakashi ezimbalwa ngezinye izilimi. Lokhu kuyehluka kuye ngomuzi, nabaqhubi bezokuvakasha.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lwakho oluya emadolobheni amahle kakhulu aseYurophu nasekuhambeni ngezitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “7 Best Free Walking Tours In Europe” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-free-walking-tours-europe%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / zh-CN ukuba / fr noma / izilimi de nokuningi.
#traveleurope #walkingtours citywalkingtourseurope Europefreewalkingtours Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelberlin TravelPrague TravelToAmsterdam TravelToParis